Kahor intaadan gudbin - AfricArXiv
Macluumaadka guud ka hor intaadan gudbin
Maxay tahay sababta aad ugula wadaagaysid natiijooyinkaaga cilmi-baaris kaydiyaha alaabada hore?
Buug-gacmeedyo diyaarin ah oo lagu martiqaaday oggolaanshaha kaydka AfrikaArxiv si xor ah oo deg deg ah faafinta iyo dood caalami ah ee wax soo saarka cilmi baarista ka hor inta aan lagu daabicin joornaal kuwa kale ee dib loo eegay.
Dhamaan qoraalada la daabacay waxaa la siin doonaa a CC BY 4.0 liisanka iyo a DOI (aqoonsiga walaxda dhijitaalka ah) iyo sidoo kale lagu sharraxay Google Aqoonyahan. Markaad dib u adeegsaneyso, iyo gaar ahaan markii la xiganayo, xaalada bilawga waa in si cad loo calaamadeeyaa.
Fadlan ogow: AfrikArXiv maahan joornaal mana qiimeeyo tayada sayniska ee qoraal gacmeed dhammaan faahfaahinta. Markuu qoraalku gudbay dhexdhexaad isla markaana la daabaco, wuxuu ku sii negaanayaa nidaamka weligiis. Waxaan xaq u leenahay inaan ka laabanno qoraallada qoraalka ah kadib daabacaadda haddii khayaanada ama khayaanada la aqoonsado.
Waxaan ku dhiirigelineynaa is dhexgalka bulshada annaga oo ka faalloonayna oo la wadaagaya waxyaabaha la diyaariyo. Read more at info.africarxiv.org/peer-review.
Iska hubi u hoggaansanaanta joornaallada iyo xilliyada cunaqabateynta: Isticmaal SHERPA / RoMEO adeegga si loo hubiyo siyaasadaha daabacaadda joornaalada wixii faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan ikhtiyaarada is-diiwaangelinta ee joornaalka aad ku qorsheyneyso inaad ku soo daabacdo maqaalkaaga.
Waxaan dhiirigelinaynaa soo gudbinta laga bilaabo
Saynisyahanno Afrikaan ah oo sal u ah qaaradda Afrika
Saynisyahanno Afrikaan ah oo hadda xarun ku leh machad marti-geliya oo ka baxsan Afrika
saynisyahano aan Afrikaan ahayn oo ka warbixiya cilmi baaris lagu sameeyay dhulka Afrika; doorbidayo qorayaasha iskaashatada Afrika ee liistada leh
saynisyahano aan Afrikaan ahayn oo ka warbixiya daraasad laxiriirta arrimaha Afrika
Waxaan aqbalnaa noocyada soo socda ee qoraalka gacmeed - daabacaad ama warqad dhejin ah:
Maqaallada cilmi baarista
Waraaqaha dib u eegista
Soo jeedinta mashruuca
Natiijooyinka 'diidmo' iyo 'null' (sida natiijooyinka aan taageerin mala-awaalka)
Waraaqaha xogta iyo hababka
Waraaqaha sharaxa macluumaadka
Noocyada qaababka kale ayaa loo qaddarin doonaa marka la soo gudbiyo.
Ku dar faylasha dheeriga ah iyo xogta
Waad ku dari kartaa kuna xiri kartaa faylasha dheeriga ah qaab kasta oo leh kaydinta aan xadidnayn.
Waxaa daabacay maqaallo cilmi baaris ah
Haddii aad rabto inaad la wadaagto qoraal gacmeed oo horeyba loogu daabacay maqaal joornaaliis, gal gal howcanishareit.com oo ku dheji maqaallada 'DOI' maaskaro baarida; Hubi haddii 'sida loo daabacay' ay ka mid tahay qaababka daabacan ee la aqbalay.
Inta badan joornaalada tacliinta waxay aqbalaan diiwaan gelinta qoraalka, qaarna ma ogola. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato hubi Xogta Sherpa / RoMEO.
Diyaarso qoraal gacmeedkaaga
Kusoo qaado qoraal gacmeedka ah faylka loo yaqaan PDF.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga qaabeynta, waxaad isticmaali kartaa shaxanka qoraal gacmeedka soo socda oo ay soo wada saareen kooxda dhexdhexaadinta soo gudbinta AfrikaArXiv.
Ku dar qoraal bogga hore ee sheeganaya "Kani waa qoraal hore oo loo soo gudbiyey joornaalka XXX" halka ay ku habboon tahay. Marka qoraalku aqbalo joornaal kooxe ah oo dib loo eegay waxaad ku cusboonaysiin kartaa daabacaadda waraaqaha boostada ama qoraalka qoraaga ee la aqbalay waxaadna u beddelan kartaa qoraalkan illaa "Kani waa dib u dhigis dib loo fiiriyay oo laga aqbalay joornaalka XXX."
Fadlan hubso inaad ixtiraamto shuruudaha xuquuqda daabacaadda iyo liisanka ee faylasha aad soo geliso. Buug-gacmeedyada cilmiga leh, shatiga sida ugu badan loo adeegsado waa CC-BY-SA 4.0.
Ku sii wad inaad soo gudbiso waraaqdaada
Hadda oo aad akhriday dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah isbarbardhigga iyo kala-doorbidida ka dhexeysa aaladaha lammaanahaaga si aad ugu gudbiso qoraal gacmeedkaaga:
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u dhisi laheyn keyd diyaaradeed oo Afrika leedahay sidaas darteedna waxaan gaar gaar u gaarnaa oo aan la munaaqashannaa ururo kale iyo iskaashato kale duwan. Dhanka kale, waxaan la shuraakoo nahay shirkadaha kale ee adeegga dejinta diyaargarowga sida hoos ku taxan.